Global Voices teny Malagasy » Karabagh-Ambony : Ahoana no hampironana ny olona hijery ny tena zavamisy iainana ? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 25 Febroary 2020 5:18 GMT 1	 · Mpanoratra Elisa Garner Nandika avylavitra
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Armenia, Azerbaijan, Frantsa, Ady & Fifandirana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Vaovao Tsara, Zon'olombelona
Ny tontolo tazamaso ao Karabagh-Ambony. Sary an'i Bouarf CC-BY-2.0
Hatramin'ny 1994 nanaovana sonia ny fampitsaharana ady, tsy misy firosoany mihitsy ny antontan-taratasy momba ny faritra Karabagh-Ambony. Na teo aza ny ezaka nataon'i Etazonia, Frantsa ary Rosia mba hampizorana ny roa tonta ho amin'ny làlan'ny marimaritra iraisana, tsy misy zavatra vita. Ny mifanohitra amin'izay, toa vao mainka samy mifikitra amin'ny heviny, indrindra fa ny ankolafy armeniàna. An'ireo mpanelanelana ny hadisoana, diso mibahana sehatra loatra ve ? Ny fanovàna ny fomba fanosohana vahaolana no mety hitondra ireo firenena roa tonta ho eo anatin'ny kianjan'ny marimaritra, raha tsy hampitsahatra amin'ny fomba mahagaga ny fifandirana aza.
Misy ireny fifandirana ireny izay fantatsika ny fotoana nanombohany, saingy mampanontany tena raha dia tsy hitsahatra mandrakizay. Ny fifandonana Israeliàna sy Palestiniàna no ohatra mivaingana amin'izany, tsy isalasalàna satria ny tena resahana be indrindra ety anaty fampahalalambaovao. Saingy tena mamiratra amin'ny tsy firaharahian'ny mpanao gazety azy kosa ireo hafa, raha mirotsaka an-tsehatra kosa ireo fiombonambe iraisampirenena, saingy anaty fitavozavozàna.
Toy izany ny toejavatra misy ao Karabagh-Ambony, faritra misy foko mitokana ao Azerbaïdjan, any atsimo-atsinananan'ny Kaokazy ary nomen'i Maosko ho an'ny Repoblika federaly miteny tiorka ao Azerbaïdjan tamin'ny fotoana nampidirana azy ho sovietika. Na neken'ny fitondrana sovietika ho faritra mizaka tena aza, tsy nitsahatra nitaky ny fitambarany amin'ny Repoblikan'i Armenia ny foko armeniàna monina ao. Tamin'ny 1988, ny fitiavan-tanindrazana nifàka fony vanim-potoana nitondran'i Gorbatchev dia nanosika ireo Armeniàna tao Karabagh-Ambony hampiakatra ny feon'ny fitakiana. Teo, araka izany, no nanomboka ny firodanan'ny daomy, izay nitondra ho amin'ny fipoahana avy ao anatiny ho an'ny firaisana sovietika.
Fampitsaharana nijanona ho ambony latabatra loatra
Nanomboka ny 1991, fotoana voalohany nanehoan'ireo foko armeniàna ny hetahetany hahaleo tena, ary hatramin'ny 1994, ady telo no efa nifanandrinan'ireo « Tatars» nitoetra teny an-dohasaha, antsoina ankehitriny hoe Azeris tamin'ireo armeniàna mponina an-tendrombohitra, saropiaro amin'ny fakàna ny tany izay nolavina hatrany tsy ho azy ireo. Tamin'ny 1994, nisy ny fanaovana sonia fampitsaharana ady izay tsy mbola tonga aminà fifanarahana fandriampahalemana hatramin'izao, ary izany dia na teo aza ny fifampiraharahàna nandraisan'ny vondrona Minsk, iarahan'i Etazonia, Rosia sy Frantsa nitantana tamin'izany fotoana izany. Toy ny ngoly ilay fifandonana, na kely aza, tsy nisy vahaolana politika nentina hanafay ireo anton'ny maha-lian'ady .
Manohy miasa ireo mpanelanelana avy amin'ny Minsk mba hisian'ny mety ho marimaritra azo ekena sy mifanaraka amin'ny tena zavamisy iainana ho an'ny ankolafy roa tonta : ny famerenana ireo faritra nobodoina sy ny zo amin'ny fiverenana, ho takalon'ny fizakantena eo an-toerana ho an'ireo Armeniàna, arahana fiantohana ny filaminana ahitàna hetsika fampandriana fahalemana ary lalantsara iray mampifandray mankany Armenia. Saingy tsy mety amin'i Armenia, izay tsy dia mirona loatra hilefitra amin'ireo faritany izay izy irery, manoloana ny lalàna iraisampirenena, no mihevitra ny tenany ho tompony.
« Na eo aza ny fahasamihafantsika any amin'ireo faritra hafa eto amin'izao tontolo izao, katsahantsika ny handrindra ny diplaomasiantsika momba an'i Karabagh », hoy i Erevan James Warlick, Amerikàna mpiara-mitantana ny vondrona Minsk ao amin'ny OSCE , namerina nanamafy mba hanehoana fa i Etazonia sy Rosia dia nanohy ny ezaka nataon'izy ireo hikatsahana vahaolana amin'io fifandonana io, izay efa naharitra loatra, niteraka fahafatesana an'arivony marobe nandritra ireo taona nifandimby ary mpitsoaponenana an'aliny maro avy amin'ny andaniny sy ny ankilany.
Ankoatra izay, mba hahafantarany misimisy kokoa ny fiarahamonina sy ny andrimpanjakana Karababh, Frantsa dia nandefa iraka iray ahitàna parlemantera frantsay efatra, ny 8 hatramin'ny 12 Septambra,  mba hamita iraka arahan'asa tany Karabagh-Ambony, tsy isalasalàna fa hevitra nanosika izany ny mba hahafahana miditra an-tsehatra anatin'ireo fifampiraharahàna, tsy itompoana teny fantatra. Satria izany dia hitondra ho amin'ny fahatsapàn'ny hafa hoe voabaikon'ny fiombenambe iraisampirenena amin'izay làlana tokony hizorany hikatsahana fandriampahalemana ka mety vao mainka hampiziriziry ny tsirairay avy.
Hisian'ny fanelanelanana tsy itompoana teny fantatra loatra hoe?
Inona moa no tsy mampety an'izany ? Azo takarina tsara ny hoe mifanondro basy ireo roa tonta mpifanandrina rehefa misy hafa mirotsaka mitafy ny fanamian'ny mpandamina ao anatin'ilay sakoroka, na dia manana izay fikasàna tsara indrindra aza ito farany.
Mizotra mankamin'izany ny fandalinan'ilay rosiàna mpandalina pôlitika, Andreï Arechev  :
Tsy maintsy manandrana fomba maro ireo mpanelanelana mba hamahàna ilay olana, ary fomba firoso entina hanamavaina ny toedraharaha misy, sady ireo mpanelanelana koa, izay mitefotefoka mihitsy ny fanakianana an-dry zareo, dia tsy tokony hanambara izay sitrapony amin'ireo mpifanandrina.
Araka ny heviny dia io fitsabahana io no vato misakana ny fifampiraharahàna:
Ao no tena antony goavana amin'ny tsy fifankahazoana eo amin'i Armenia sy Azerbaïdjan. Mazàna dia ny sitrapon'ireo mpanelanelana no tereny ho arahana, ary tsy mitondra soa ho an'ireo mpifanandrina izany. Ny asan'i Maosko sy ireo mpanelanelana hafa koa dia manao izay hiantohana ny dingan'ny fifampiresahana, sy misoroka ny tsy hiverenan'ireo habibiana ary manamaivana ny toedraharaha any amin'ilay faritra misy fifandonana.
Tsy isalasalàna fa amin'io fomba fijery ny fanelanelànana tsy mitsabatsabaka io no namorian'ny sekreteram-panjakana amerikàna John Kerry tamin'ny fiandohan'ny Septambra, nandritra ny ora roa ivelan'ny fihaonana an-tampon'ny OTAN, ny filohan'i Armenia sy Azerbaïdjan ary ireo diplaomaty amerikàna. Ndeha isika hanantena fa ireny fandraisana andraikitra miditra lalina kokoa hatrany ireny, mba hanelanelanana tsy misy fitsabatsabahana, dia ho tonga amin'ny fanalefahana ireo faritra roa ireo ka hivoahan'ireo marika voalohan'ny fitoniana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/02/25/147029/
 na kely aza, tsy nisy vahaolana politika nentina hanafay ireo anton'ny maha-lian'ady: http://www.monde-diplomatique.fr/2012/12/DESCAMPS/48479
 Erevan James Warlick, Amerikàna mpiara-mitantana ny vondrona Minsk ao amin'ny OSCE: http://www.armenews.com/mot.php3?id_mot=488
 iraka iray ahitàna parlemantera frantsay efatra, ny 8 hatramin'ny 12 Septambra,: http://www.france-karabagh.fr/
 rosiàna mpandalina pôlitika, Andreï Arechev: http://french.ruvr.ru/2014_08_22/Le-Haut-Karabagh-une-mediation-est-incontournable-2814/